DStv အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（22.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
DSTV ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည် DSTV streaming app နှင့်သင်နှစ်သက်သောပြပွဲများ, ရုပ်ရှင်နှင့်အားကစားကိုနှစ်သက်နိုင်သည်။ ယခု download လုပ်ပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောတီဗွီအစီအစဉ်များ, အားကစားအသင်းများ, အားကစားအသင်းကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံပါနှင့်, DSTV အက်ပလီကေးရှင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်း, သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ် Android TV တွင်ကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုအမီလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်မှသင်၏မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင်အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုရန် download လုပ်ပါ။
သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာအွန်လိုင်းစမ်းချောင်း2စီးကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ခံစားနေရသောစီးရီးများ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲကိုဖမ်းမိနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်ပေမယ့်ကြီးမားသောဂိမ်းကိုလက်လွတ်ချင်ကြဘူးလား? သင်၏ဖုန်းကိုညှိ။ သင်၏တိုက်ရိုက်အားကစားကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ သင်၏ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောရုပ်ရှင်များကိုသင်ဖမ်းမိစဉ်ထိုင်ပြီးအနားယူပါ။
DSTV ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့် DSTV အက်ပ်တွင်ဤအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။
- ၎င်းကိုကြည့်ရှုပါ, ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် Live Tet TV channel များကို 3G / 4G သို့မဟုတ် WiFi မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ထားသောတီဗီလိုင်းများ streaming လုပ်ပါ။ - လွဲချော်သည်။ နှင့်အမီလိုက်ပေါ်ရုပ်ရှင်များ။
မိုဘိုင်းပစ္စည်း4ခုအနက်အော့ဖ်လိုင်းကိုပျော်မွေ့ရန် WiFi ကိုကြည့်ရှုရန်မိုဘိုင်းဒေတာများကိုမသုံးလိုပါ။
- သင်ကြည့်လိုသည့်အားကစား, ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်များအပေါ် အခြေခံ. သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုကြည့်လိုသောမိသားစု0င်များတစ်စုစီကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်ပရိုဖိုင်း6ခုအထိတည်ဆောက်ပါ။
သင်၏ကြည့်ရှုမှုကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားလိုပါကကြိုတင်ကြည့်ရှုလိုပါကထည့်ပါ နောက်မှပြန်လာရန်သို့မဟုတ် 8 ရက်တီဗီလမ်းညွှန်အပြည့်ဖြင့်ပြန်လည်0င်ရောက်ရန်သင်၏စောင့်ကြည့်စာရင်းသို့သွားပြီးသင်၏ကြည့်ရှုမှုကိုစီစဉ်ရန်သတိပေးချက်များကိုသတိပေးသည်။
- ကလေးများအားဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအပိုင်းသည် PIN ထိန်းချုပ်ထားသည့်0င်ရောက်နိုင်သည့်လုံခြုံစိတ်ချရသောရှုမြင်ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ သင်ပြောင်းရွှေ့သောအခါသင်၏အကောင်းဆုံးချစ်ရသည့် DSTV ဖျော်ဖြေမှုကိုသင်၏အကောင်းဆုံးချစ်မြတ်နိုးရသော DSTV ဖျော်ဖြေမှုကိုလွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။
အကယ်. သင့်တွင် DSTV မရှိပါကပြ problem နာမရှိပါက app ကို download လုပ်ပါ, sign-up, sign-up ကို download လုပ်ပါ သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ် Android TV (အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်လက်စိမ်းလက်တီဗွီတွင်အခမဲ့တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်လမ်းကြောင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ခြင်း။ သငျသညျဒေတာရရှိထားသလောက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သွားရတာကောင်းပါတယ်။
* Live TV နှင့် DSTV အက်ပ်တွင်အကြောင်းအရာများကိုအမီလိုက်ခြင်းသည်သင်၏ subscription package နှင့်နိုင်ငံအနေဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Geo-blocking ကြောင့်ဤအကြောင်းအရာကို DSTV ပိုင်နက်ရှိနိုင်ငံများအတွင်းသာဖွင့်နိုင်သည်။
တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များအရ DSTV အက်ပလီကေးရှင်းကိုမမှန်မကန်သောဂူဂဲလ်ကိရိယာများတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ Google Play Store Menu -> Settings> Settings> Settings> Device Certification သို့သွားရန် Google Certified device ကို သုံး. သင်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
facebook: / dstv - https://www.facebook.com/ DstvsSouthafrica
ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center: 011 289 222
ဘာအသစ်လဲ DStv 2.3.17
DStv App | How to
watch Dstv channels for free #freeDstv#bestfootballstreamingapp
KARL APPS REVIEW
This Is African Football & DSTV Premiership Preview